Eedeyntii Dubbe u jeediyay Jabuuti maxaa laga yiri? | KEYDMEDIA ONLINE
Eedeyntii Dubbe u jeediyay Jabuuti maxaa laga yiri?
Hadal heyn xoog leh ayaa ka dhalatay eedeyntii galabtay Wasiirka Warfaafinta xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe uu ujeediyay dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiir Cusmaan Dubbe oo akhrinayay warsaxaafadeed kasoo baxay dowladda Soomaaliya kaasoo looga hadlayay qodobadii kasoo baxay shirkii Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayuu eed culus ujeediyay dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti.
Wasiir Dubbe oo akhrinaya war qoraala oo kasoo baxay Villa Somalia ayaa waxaa dhaliil la huwiyay dowladda kaliya ee garab istaagtay Soomaaliya dalkeedana ku qabatay laba shir oo aad muhiim u ah laguna soo dhisay laba dowladood oo KMG.
Hadal-heynta ayaa soo ifbaxday saacadihii udambeeyay iyadoo xilli uu soo dhawyahay Afurkii uu shir jaraa'id ku qabtay barxadda wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda Cusmaan Dubbe oo eed kulul ujeediyay Jabuuti isagoo dafiray xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal, sidoo kalena la meel dhigay dowladda Kenya.
Haddaba maxay salka ku haysaa Eedda Jabuuti loo soo jeediyay xilligan?
Waxaa jira xiriir saddex geesood ah oo udhaxeeya waddamada Itoobiya, Soomaaliya iyo Eratariya, xiriirkaasi wuxuu dowladda Soomaaliya ku qasbay in ay xiriirka ujarto dowladda Jabuuti, maadaama Eratariya iyo Jabuuti uu ka dhaxeeyo muran xuduudeed soo jiray muddo! Farmaajo ayaa ku qasbanaaday inuu lumiyo dowladda Jabuuti oo Soomaaliya abaal weyn ku leh!
Siyaasiyiinta diiddan aragtida siyaasadeed ee Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada, midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa ka falceliyay hadalkii galabta kasoo yeeray Wasiir Dubbe ee ku aaddanaa eedda dowladda Jabuuti.